KNEC oo ku dhawaaqday in qiimeyn ku sameyn doonto ardayda dhigta fasallada dugsiyada hoose dhexe | Star FM
Home Wararka Kenya KNEC oo ku dhawaaqday in qiimeyn ku sameyn doonto ardayda dhigta fasallada...
KNEC oo ku dhawaaqday in qiimeyn ku sameyn doonto ardayda dhigta fasallada dugsiyada hoose dhexe
Golaha imtixaanada qaran ee KNEC ayaa sameyn doona qiimeyn dhanka waxbarashada ah gaar ahaan ardayda dhigta fasallada 1-aad ilaa -3aad iyo 5-aad ilaa 7-aad ee dugsiga hoose dhexe.
Wareegto ka soo baxday madaxa fulinta ee golaha KNEC Dr. Mercy Karogo kuna socoto dhammaan maamulayaasha dugsiyada ayaa lagu sheegay in qiimeyntu lagu ogaanayo dulduleedyada dhinaca tacliinta iyadoo ardaydu ay dhiganayaan sanad dugsiyeedka labaad iyo saddeexaad ee waxbarashada.
Ardayda fasalka 7-aad ee dugsiyada hoose dhexe ayaa waxa lagu qiimeyn doonaa dhammaan maadooyinka ay ku sameyn doonaan imtixaanka qaran ee KCPE ee kala ah Xisaabta, Ingiriiska, Sawaaxiliga, Sayniska iyo Culuunta arrimaha deegaanka.
Ardayda fasallada 5-aad iyo 6-aad ayaa lagu qiimeyn doona maadooyinka kala ah Xisaabta, Ingiriiska, Sawaaxiliga iyo Sayniska
Fasalka koowaad ilaa saddeexaad- ayaa ayagana lagu qiimayn doonaa akhrinta aasaasiga, awoodda fahamka maadooyinka Ingiriiska, Sawaaxiliga iyo hawlaha Xisaabta.
Arday fasalka 7-aad ee dugsiga hoose dhexe ayaa sidoo kale lagu tijaabin doonaa maadooyinka fasallada koowaad ila lixaad iyo sanad dugsiyeedka koowaad ee waxbararashada ee fasalka ay hadda dhigtaan.
Madaxa fulinta ee golaha KNEC Dr. Mercy Karogo ayaa xustay in imtixaankan uusan ahayn mid qaran oo shahaadi ah.
Qiimeynta ku saleysan tijaabadan ayaa socon doonta inta u dhaxeysa maanta ilaa 22-ka bishaan ee ku beegan maalinka Jimcaha ee toddobaadkan.
Previous articleDHAGEYSO:Guddoomiyaha shaqaalaha dowladda oo faahfaahiyay marxaladihii shaqaalaha dowladda Soomaaliya soomaray
Next articleDHAGEYSO:Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay go’aan adag qaadanayso hadii aysan ku qancin guddi IGAD ka socday